Saadaalin Laga Sameeyey Musharaxa Laga Yaabo in uu ku Guulaysto Xilka Madaxweynaha Soomaaliya - iftineducation.com
Saadaalin Laga Sameeyey Musharaxa Laga Yaabo in uu ku Guulaysto Xilka Madaxweynaha Soomaaliya
aadan21 / September 1, 2012
iftineducation.com – Afeef: Saadaasha aan samaynayo waa fikirkayga, kamana tarjumayso fikirka website-ka iga aqbalay inuu soo gudbiyo, ama fikradda koox gaar ah.
Arar: Soomaaliya ma ahan sidii ay ahayd 3 sano ka hor, rajada Somaalina maahan sida ay waqtigaasi ahayd, taageerada beesha caalamkuna ma midaysnayn sida ay maanta tahay. Saddexdaas qodob ayaan ku salayn doonaa saadaashayda.
Murashixiintu waa badan yihiin; qaar waxaa jira isku sharaxay in magacooda la maqlo, qaar waa jiraan doonaya inay xil kale ku qal qaalsadaan, sida wasiir ama agaasime, halka qaybta ugu muhiimsan ee aan ku salayn doono saadashaydan ay yihin qayb aan u baxshay muruqyo waynta oo hammiga kursiga iyo inay madax noqdaan ay ka dhab tahay.
Waxayna kala yihiin: –
1. Shariif Sheekh Axmed.
2. Dr. C/wali Gaas.
3. Maxamed C/laahi (Farmaajo).
4. Dr. Baadiyow
5. Dr. Cabdullahi Caddow.
6. Dr. Axmed Ismaaciil Samatar.
Shariif Xasan Sheekh Aadan , wuu iigu jiri lahaa qaymaynta hase ahaatee rajada uu hadda madaxwayne ka leeyahay waa mid aan jirin, maxaa yeelay Prof. Jawaari oo beeshiisa kasoo jeeda ayaa noqday raysul baarlamaanka Soomaaliya, oo hadda waddo kale oo u bannaan ayuu raadsan ee dadka tartamaya kuma darayno.
Lixda murashax waxaan u soo qaadatay waxay leeyihiin miisaan ama aqoon, caanimo, dhaqaale ama mansab siyaasadeed oo lagu soo bartay. Waxaad mooddaa murashixiinta miisaanka leh 90% ay ka kala yimaadeen beelaha Hawiye iyo Daarood, sidaasina madaxwaynaha Soomaaliya 90% waxay u badan tahay inuu qabto qof Daarood ah ama qof Hawiye ah.
Shariif Sheekh Axmed
Waa madaxwaynahihii ugu danbeyay ee waddanka , waxaana uu kasoo jeedaa beelaha daga magaalada Muqdisho, waxa uu kamid ahaa dadka ugu rajada wanaagsan oo la saadaalinayo in uu kusoo bixi karo Jagada Madaxweyne maadaama uu tagaeero badan ku leeyahay Gudaha Baarlamanaka
Maadaama uu aha madaxwaynihii dalka cadaadis badan oo uu sameeyay waa loo hogaansamay; tan labaad markii uu xabadka u garaacay haddaan beesha Hawiye la dooran inaysan waxba kala socon doonin markaasi oo uu ilaaway in dalka lawada leeyahay ee aan lakala lahayn, wuxuuna dhumiyay qayb wayn oo kamid ah taageeradii iyo hammigii loo qabay, wuxuu kaloo dhumiyay diblomaasiyaddii looga baahnaa qof madaxwayne ah, oo xanaqiisii ayaa ka awood batay. Wali inuu noqdo madaxwayne waa ku jirtaa meesha , hase ahaatee rajadiisu waa 650%
Dr. Cabdiwali Gaas
Asaga iyo xukuumaddiisa lagu magacaabo Badbaado Qaran waxay ku faanaan in waddanka xasiliddiisa ay gacanta kusoo dhigeen, taageeradii Soomaalida iyo beesha caalamkana ay kasbadeen. Aqoontiisu kalsooni badan ayay u keentay oo dhowrkii bilood ee ugu horaysay ayuu kasbaday taageero wayn, walow ay dhici karto malaayiin Soomaali ah inay wax qabadkiisa ogyihiin laakiin aysan qiri karaynin qabiil nacayb iyo hebel nama xukumayo wax aan ka ahayn darteed, rajadiisu waa in ka badan 60%
Maxamed C/laahi Farmaajo
Dhowrkii bilood ee uu xilka hayay wuxuu kasbaday sumcad kusiman koonfurta Soomaaliya. Maxaa yeelay gobollada Puntland oo ay joogaaan Soomaali fara badan waa ay isku dheceen oo waxaa lagu sameeyay mudaaharaadyo looga soo horjeedo markii xukuumadda iyo shacabka uu si siyaasadaysan shacabka soo dhawaystay.
Farmaajo waa nin dhalinyaro ah oo aqoon yahan ah, saaxada siyaasaddana wuu ka maqnaa muddo sanad ah oo galaangalka gudaha waxaa uga fiicnaa Shariif Axmed, Gaas iyo Shariif Xasan. Dadka wax dooranaya qaab qabiil bay meesha ku fadhiyaan , waxayna u badan tahay in Farmaajo uu ka codyaraan doono labada masuul ee kor aan kusoo xusnay, hadii ay dadwaynuhu wax dooranayaan waa laga yaabi lahaa inuu soo galo kaalin. Rajada madaxwayne nimo ee uu leeyahay waxay kusiman tahay 20%
Waxaa mar mar dadka siyaasadda ka falanqooda ay leeyihiin madaxwayne ama raysulwasaare mid waa uu noqonayaa. Sababaha sidaasi loo leeyahana waxay tahay asagoo ah aqoon yahan , aan ka qayb galin dagaalladii sokeeye ee dalka ka dhacay. Tan kale wuxuu la qabiil yahay Shariif Axmed madaxwaynihi hore oo waxaa dhici kartra inuu booska ku cariiriyo Shariif Axmed. Dhinaca kale waxa uu ku xiran yahay xisbi diini ah (Islaax) oo lacag iyo saamaynba leh . Rajadiisu waa 40%
Dr. C/laahi Caddow
Waa aqoon yahan la arko markii doorasho soo dhawaato. Inta badan laguma arko dalka gudihiisa, lagamana maqlo idaacadaha, lagumana arko goobaha kale ee siyaasadda. Kama hadlo amuuraha kala duwan ee dalka ka jira, galaangal buuxana uma lahan xubnaha baarlamaanka iyo waliba gudaha Muqdisho, waxaa uu ku daalay qurbaha, dhowr doorasho oo horay u dhacayna waa uu ka qayb galay.
Caddow inkastoo oday miisaan shaqsiyadeed leh uu yahay uusanna dagaalladii sokeeye addin ahaan uga qayb galin , hase ahaatee rajadiisu waa ka liidataa dhammaan ragga kor ku xusan . Waana 10%
Prof Axmed Ismaaciil Samatar
Waa aqoon yahan qurbaawi ah , oo jaamacad ka dhiga bannaanka. Waxaa aad loogu yaqaanaa inuu yahay nin aad u dhaleeceeya hadba maamulka Soomaaliya ka dhasha sanadihii hore. Oo ninkii dhagaystay berigii la doortay Shariif Axmed aad buu rajada u xumeeyay xilli uu macaamiil wayn ka ahaa laanta afka Soomaaliga ee BBC-da oo saaxiibkii Yuusuf Garaad uu maamule ka ahaan jiray. Prof Samatar wuxuu madax u yahay xisbigii ugu horeeyay ee siyaasadeed ee caddeeya inuu arimaha siyaasadeed galayo wixii ka danbeeyay bur burkii oo lagu magacaabo Hiil qaran. Prof Samatar waa qurbaawi aan dalka wax wayn kala socon. Haddii ay jiri lahayd doorasho one man –one vote waa laga yaabi lahaa in codad uu heli lahaa, laakiin hadda oo ay u muuqato in beeshiisu ay u badan tahay dhinaca dalka gooni u goosadka ah ee Somaliland inaysan gayaysiin doonin inuu madaxwayne noqdo. Rajadiisa madaxtinimo in ka yar 10%.
Xiliga la qabanayo Doorashada Madaxweyne ee Soomaaliya oo goordhaw la Shaaciyay
Amin Arts oo Sawir cajiib ah kasameeyay Shirqoolka uu maleegayo Shariif Xasan Sheekh Aadan(Daawo Sawirka)